Iibso "Hooyaday Waa Sanamkayga" Warqad Lagu Daabacay Shaati Gabdho Gacmo Dheer Ah Oo Saraawiil & Madaxba Leh - Rar Bilaash Ah & Cashuur La'aan WoopShop®
"Mommy Is My Idol" Warqad Lagu Daabacay Funaanad Gacmo Dheer Oo Gabdho Ah Oo Qaawan Saraawiil & Madaxa
Qadarka Kidaanka 6M 24M 3M 18M 12M
Caddaan / 6M Caddaan / 24M Caddaan / 3M Caddaan / 18M Caddaan / 12M
"Mommy Is My Idol" Warqad Lagu Daabacay Funaanad Gacmo Dheer Oo Gabdhaha Yar Yar leh Saraawiil & Madaxa - Caddaan / 6M gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Moodeelka: N176231
Dharka ayaa ah mid aad u fiican, midabada aan aad u jeclaa, waa mid raaxo leh. Way yar yahiin oo qaar ka mid ah dusha sare ee gudaha ayaan sidaa u qurxoonayn. Laakiin guud ahaan waan ka helay.
Hore ayaa loo dalbaday, dhammaadka xagaaga. Maaddadu way fiican tahay. Qiimaha noocaas ah waxaan u maleynayaa xirmo aad u fiican